2021..Microsoft Oo Soo Kordhineysa Windows Nooc Cusub Ah! | Xaqiiqonews
2021..Microsoft Oo Soo Kordhineysa Windows Nooc Cusub Ah!
Shirkadda Ameerikaanka ee Sameysa ablikeeshinada Kombiyuutarada ku shaqeeyaan ee Windows, ayaa 10 sano ka dib dooneysa in ay soo kordhiso Fershan cusub oo windows10 ah kaasi qaadan doono magaca ah “windows10X”.
Shirkadda ayaa ogeysiiskeeda raacisay erayadan “Windows waa soo laabtay”, shirkadda ayaana sanadkan u aqoonsatay sanad Weyn oo isbadal badan lagu sameyn doono Window10, sida Xaqiiqonews ay ka soo xigatay webseetka Windows central.
Sidoo Kale Aqri: Tiknoolijiyaddii Dhimatay Sanadka 2020
Wararka qaar ayaa sheegaya in shirkadda ay isbadal ku sameyn rabto wajiga hore ee Windows10, iyada oo la sadaalinaayo in isbadalkan la soo bandhigi doono bartamaha sanadkan socda.
Websseetka Business Insider ayaa sheegay in arinta ay xiiso gaar ah yeelatay markii shirkaddu ay dhawaan baahisay boosas banaan oo shaqooyin ah iyada oo raadineysay injineero ku takhasusay borograaminta si gaar ah kooxda tijaabooyinka ee Windows core.